पानी पिउन अल्छी मिर्गौलालाई सास्ती ! - Samudrapari.com
पानी पिउन अल्छी मिर्गौलालाई सास्ती !
३१९७ पटक हेरिएको
त्यसैले मिर्गाैला स्वस्थ राख्न सन्तुलित खानपान र पर्याप्त पानी पिउनुका साथै व्यायाम गरेर शरीरलाई सक्रिय राख्नु पर्नेमा उहाँको सुझाव छ । समयमै ध्यान पुर्याउन सके सबै मिर्गौला रोग निको हुने हुन्छ ।
सरकारले मिर्गौला रोगीका लागि डायलासिस सेवा निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौलाको उपचार महँगो भएकाले नेपालीले सहज रुपमा उपचार पाउन सकूँन भनेर डायलासिस जस्तै आगामी वर्षदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पनि निःशुल्क गर्ने तयारी गरिरहेको स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा बताउनुहुन्छ ।